The Princess Switch: Switched Again(2020) | MM Movie Store
ဒီကားက The Princess Switch (2018) ရဲ့အဆကျပါ…လူကွိုကျမြားပွီး ပေါကျလို့ 2020မှာSwitched Againဆိုပွီး ဆကျရိုကျကူးထားတာပါ…2018ကို ကွညျ့ပွီးသားသူက ပွဿနာမရှိပမေဲ့မကွညျ့ရသေးဘဲနဲ့တော့ ဒီကားကိုသှားကွညျ့ရငျ ခေါငျးမူးသှားမှာမို့ ၂၀၁၈ ကိုအရငျကွညျ့လိုကျပါ…
ဘုရငျစနဈအုပျခြုပျတဲ့ ဘယျဂရေးဗီးယားနိုငျငံ နဲ့ မှနျတဲနားရိုး နိုငျငံ(၂)ခုရှိတယျ…မာဂရကျဆိုတဲ့ကောငျမလေးက မှနျတဲနားရိုး နိုငျငံရဲ့မငျးသမီးလေးပေါ့…၂၀၁၈ က ကားထဲမှာ ရုပျခငျြးလုံးဝတူတဲ့သာမနျအရပျသူလေးစတေးစီ နဲ့ မှနျတဲနားရိုးနိုငျငံက မငျးသမီး မာဂရကျတို့ဟာလူခငျြးခဏခြိနျးရငျး နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ သာမနျအရပျသူလေး စတေးစီဟာ Belgravia နိုငျငံက မငျးသားနဲ့အိမျထောငျကသြှားရငျတျောဝငျမိသားစုဖွဈသှားတယျ….
မငျးသမီးမာဂရကျကတော့ အရပျသားနဲ့ခဈြကွိုကျရငျး သာမနျဘဝနဲ့နထေိုငျဖို့ကွိုးစားပမေဲ့သူ့မရဲ့ Montenaro နိုငျငံက ဘုရငျမ အရာကိုဆကျခံဖို့အကွောငျးဖနျလာတဲ့အခါ သာမနျအရပျသားခဈြသူနဲ့ပွတျသှားတယျ..ဒါကို သိလို့မနနေိုငျတဲ့ စတေးစီက ကူညီဖို့ ကွိုးစားရငျး ၂၀၂၀ဇာတျလမျးကိုစထားပါတယျ…
၂၀၁၈ ကားကိုမကွညျ့ရသေးတဲ့သူတှအေဖို့ အညှနျးဟာ အနညျးငယျရှုတျထှေးနိုငျလို့ ဇာတျကားကွညျ့လိုကျရငျတော့သဘောပေါကျသှားပါလိမျ့မယျ..ဒီကားက ဇာတျလမျးလေးလညျးကောငျးသလို စိတျလှုပျရှားစရာ Twistလေးတှလေညျးပါလို့ကွညျ့ရအတျောကောငျးပါတယျ…
ဆောငျးရာသီရဲ့လှပတဲ့ရှုခငျးတှခေံစားရငျ ပြျောရှငျဖှယျဒီဇာတျလမျးကိုကွညျ့ရှုရငျးStay Home တဲ့ ကာလကို အထိုကျအလြှောကျလှပစှာကြျောဖွတျနိုငျစလေိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ရငျး….
ဒီကားက The Princess Switch (2018) ရဲ့အဆက်ပါ…လူကြိုက်များပြီး ပေါက်လို့ 2020မှာSwitched Againဆိုပြီး ဆက်ရိုက်ကူးထားတာပါ…2018ကို ကြည့်ပြီးသားသူက ပြဿနာမရှိပေမဲ့မကြည့်ရသေးဘဲနဲ့တော့ ဒီကားကိုသွားကြည့်ရင် ခေါင်းမူးသွားမှာမို့ ၂၀၁၈ ကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါ…
ဘုရင်စနစ်အုပ်ချုပ်တဲ့ ဘယ်ဂရေးဗီးယားနိုင်ငံ နဲ့ မွန်တဲနားရိုး နိုင်ငံ(၂)ခုရှိတယ်…မာဂရက်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက မွန်တဲနားရိုး နိုင်ငံရဲ့မင်းသမီးလေးပေါ့…၂၀၁၈ က ကားထဲမှာ ရုပ်ချင်းလုံးဝတူတဲ့သာမန်အရပ်သူလေးစတေးစီ နဲ့ မွန်တဲနားရိုးနိုင်ငံက မင်းသမီး မာဂရက်တို့ဟာလူချင်းခဏချိန်းရင်း နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ သာမန်အရပ်သူလေး စတေးစီဟာ Belgravia နိုင်ငံက မင်းသားနဲ့အိမ်ထောင်ကျသွားရင်တော်ဝင်မိသားစုဖြစ်သွားတယ်….
မင်းသမီးမာဂရက်ကတော့ အရပ်သားနဲ့ချစ်ကြိုက်ရင်း သာမန်ဘဝနဲ့နေထိုင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့မရဲ့ Montenaro နိုင်ငံက ဘုရင်မ အရာကိုဆက်ခံဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ သာမန်အရပ်သားချစ်သူနဲ့ပြတ်သွားတယ်..ဒါကို သိလို့မနေနိုင်တဲ့ စတေးစီက ကူညီဖို့ ကြိုးစားရင်း ၂၀၂၀ဇာတ်လမ်းကိုစထားပါတယ်…
၂၀၁၈ ကားကိုမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအဖို့ အညွှန်းဟာ အနည်းငယ်ရှုတ်ထွေးနိုင်လို့ ဇာတ်ကားကြည့်လိုက်ရင်တော့သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်..ဒီကားက ဇာတ်လမ်းလေးလည်းကောင်းသလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Twistလေးတွေလည်းပါလို့ကြည့်ရအတော်ကောင်းပါတယ်…
ဆောင်းရာသီရဲ့လှပတဲ့ရှုခင်းတွေခံစားရင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဒီဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ရှုရင်းStay Home တဲ့ ကာလကို အထိုက်အလျှောက်လှပစွာကျော်ဖြတ်နိုင်စေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း….